Uhulumeni wase-USA Uvele Washintsha Umdlalo We-EV.
Inguquko ye-EV isivele iqhubeka, kepha kungenzeka ukuthi ibisanda kuba nesikhathi sayo. Abaphathi beBiden bamemezele umgomo wezimoto zikagesi ezenza u-50% wazo zonke izinto ezithengiswa e-US ngo-2030 ekuseni ngoLwesine. Lokho kufaka phakathi ibhethri, i-plug-in hybrid nezimoto zikagesi zamaseli kagesi ...
Iyini i-OCPP Futhi Kungani Ibalulekile Ekwamukelweni Kwezimoto Zikagesi?
Iziteshi zokushaja izimoto zikagesi ubuchwepheshe obusafufusa. Kanjalo, ukusingathwa kwamasayithi esiteshini sokushaja kanye nabashayeli be-EV basheshe bafunde wonke amagama namagama ahlukahlukene. Isibonelo, i-J1772 ekuboneni kokuqala ingabonakala njengokulandelana okungahleliwe kwezinhlamvu nezinombolo. Akunjalo. Ngokuhamba kwesikhathi, i-J1772 wil ...
Yiziphi Izinto Odinga Ukuzazi Lapho Uthenga Ishaja Yasekhaya ye-EV
Ishaja ye-EV yasekhaya iyi-equitment ewusizo yokunikeza imoto yakho kagesi. Nazi izinto ezi-5 eziphezulu okufanele uzicabangele lapho uthenga Ishaja Yasekhaya ye-EV. Izinto Zendawo Yeshaja ye-NO.1 Lapho uzofaka ngaphandle ishaja ye-Home EV, lapho ivikeleke kancane ezintweni zezulu, kufanele ukhokhe ...
E-USA: Ukushaja i-EV Kuzothola u- $ 7.5B Kumthethosivivinywa Wengqalasizinda
Ngemuva kwezinyanga ezinesiphithiphithi, iSenethi ekugcineni ifinyelele esivumelwaneni sezingqalasizinda ezimbaxa zombili. Umthethosivivinywa kulindeleke ukuthi ubize ngaphezulu kwe- $ 1 trillion eminyakeni eyisishiyagalombili, kufakwe esivumelwaneni okuvunyelwene ngaso kungama- $ 7.5 billion ukujabulisa ingqalasizinda yokushaja izimoto. Ngokuqondile, ama- $ 7.5 billion azoya ...
I-Joint Tech isilahlile isitifiketi sokuqala se-ETL seNyakatho Melika yeMakethe
Kuyingqophamlando enkulu ukuthi iJoint Tech ithole isitifiketi sokuqala se-ETL seNyakatho Melika yeMakethe ensimini ye-Mainland China EV.
IGREIDSERVE iveza izinhlelo zoMgwaqo Omkhulu kagesi
Abakwa GRIDSERVE baveze izinhlelo zabo zokuguqula ingqalasizinda yokushaja imoto kagesi (i-EV) e-UK, futhi yethule ngokusemthethweni umgwaqo i-GRIDSERVE Electric Highway. Lokhu kuzofaka inethiwekhi ebanzi yase-UK yamandla angaphezu kuka-50 wamandla aphezulu 'amaHubhu kagesi' aneshaja eziyi-6-12 x 350kW ngakunye, kanye nama-rapi angaba ngu-300 ...
IVolkswagen idiliva izimoto ezisebenza ngogesi ukusiza isiqhingi saseGrisi ukuthi siluhlaza
ATHENS, Juni 2 (Reuters) - IVolkswagen ihambise izimoto zikagesi eziyisishiyagalombili e-Astypalea ngoLwesithathu isinyathelo sokuqala sokuguqula ukuthuthwa kwesiqhingi saseGrisi siluhlaza, imodeli uhulumeni anethemba lokuyinweba iye ezweni lonke. UNdunankulu uKyriakos Mitsotakis, owenza i-green green ...
IColorado ishaja ingqalasizinda idinga ukufinyelela imigomo yemoto kagesi
Lolu cwaningo luhlaziya inombolo, uhlobo, nokusatshalaliswa kwamashaja e-EV adingekayo ukuhlangabezana nezinhloso zokuthengisa izimoto zikagesi zaseColorado zango-2030. Ilinganisa izidingo zomphakathi, ezasemsebenzini nezokushaja kwezimoto zabagibeli ezingeni lesifunda futhi ilinganisela izindleko zokuhlangabezana nalezi zidingo zengqalasizinda. Ku ...
Uyishaja kanjani imoto yakho kagesi
Konke okudingayo ukukhokhisa imoto kagesi yisokhethi ekhaya noma emsebenzini. Ngaphezu kwalokho, amashaja amaningi asheshayo ahlinzeka ngenetha lokuphepha kulabo abadinga ukugcwaliswa ngokushesha kwamandla. Kunezinombolo zezinketho zokushaja imoto kagesi ngaphandle kwendlu noma lapho usohambweni. Kokubili i-AC char elula ...
Yini iModi 1, 2, 3 no-4?
Ezingeni lokushaja, ukushaja kuhlukaniswe ngemodi ebizwa nge- “mode”, futhi lokhu kuchaza, phakathi kwezinye izinto, izinga lezinyathelo zokuphepha ngesikhathi sokushaja. Imodi yokushaja - IMODE - ngamafuphi ithi okuthile ngokuphepha ngesikhathi sokushaja. NgesiNgisi lokhu kubizwa ngokuthi ukushaja ...
I-ABB yokwakha iziteshi ezingama-120 DC zokushaja eThailand
I-ABB ithole inkontileka evela kwi-Provincial Electricity Authority (PEA) eThailand yokufaka iziteshi ezingaphezu kuka-120 ezishaja ngokushesha izimoto zikagesi ezweni lonke ngasekupheleni konyaka. Lawa azoba ngamakholomu angama-50 kW. Ngokuqondile, amayunithi ayi-124 esiteshi esisheshayo se-ABB sikaTerra 54 azoba yi-ins ...
Amaphuzu okushaja ama-LDV anwebeka ngaphezulu kwezigidi ezingama-200 futhi anikezela ngama-550 TWh eSustainable Development Scenario
Ama-EV adinga ukufinyelela kumaphoyinti wokushaja, kepha uhlobo nendawo okuyo amashaja akuyona kuphela inketho yabanikazi be-EV. Ushintsho kwezobuchwepheshe, inqubomgomo kahulumeni, ukuhlelwa kwedolobha nezinsiza zamandla konke kudlala indima ku-EV yokushaja ingqalasizinda. Indawo, ukusatshalaliswa nezinhlobo ze-vehi kagesi ...